PANASONIC'S BEERKIISII ​​UGU HORREEYEY EE LA DABOOLAY WUXUU KU KICI KARAA IN KA BADAN 80 TAN OO CAGAAR AH SANNADKIIBA - PANASONIC
Panasonic waxaa loo yaqaanaa qalabka elektaroonigga macaamiisha, laakiin shirkadda Japan ayaa sidoo kale aad u qoto dheer beeraha. Sanadkii 2014, Panasonic waxay biloowday in ay sii kordhiso cagaarka gudaha bakhaarada magaalada Singapore waxayna u iibineysaa dukaamada iyo makhaayadaha. Waqtigaas, 2670 cagar labajibaaran oo beer ah ayaa soo saaray 3.6 tan oo badeeco ah sanadkiiba. Alfred Tam, Kaaliyaha Maamulaha Beeraha ee Qeybta Ganacsiga ee Panasonic, ayaa u sheegay Business Insider in goobta beeraha iyo tirada alaabtu ay ka dhigtay afar jeer tan iyo markaas.
Cagaarka Panasonic waxaa lagu koray gudaha gudaha sanadka oo dhan, iyadoo la isticmaalayo nalalka LED-yada halkii qorraxda. Sariiraha koraya waxaa lagu daboolayaa saqafka si ay u gaaraan dhalid dheeraad ah meel bannaan.
Beeraha qudaarta ee Panasonic waxay ku yaalaan bakhaar aan duudduub lahayn oo ku yaala Singapore. Waxay awood u leedahay in ay soo saarto 81 tan oo ah cagaarka sannadkiiba - 0.015% dhammaan alaabada lagu koray Singapore. Shirkaddu waxay ugu dambeyntii rajeyneysaa inay kor u qaado boqolkiiba boqol illaa 5%. Waqtigan xaadirka ah waxaa jira 40 nooc oo dalagyo ah, oo ay ku jiraan dabayl yar oo casaan ah, daboolka cad cad, saladh, jardiinada Swiss, saladh dabacsan, iyo xawaashka roobabka. Ilaa March 2017, qorshaha beeruhu wuxuu bilaabi doonaa inuu koro 30 nooc oo kale.
Si ay u koraan cagaarka, shaqaalaha Panasonic waxay dhigaan miraha yar yar ee sariiro koraya. Si ka duwan beeraley badan oo xajmi leh, Panasonic wuxuu cagaarka ku koraa cagaarka iyo hoosta LEDs halkii qoraxda, taas oo ay bixiso shirkad degaan ah oo ku dhaqanta tamar ka yar nalalka iftiinka. Beerku wuxuu kordhiyaa tirada alaabada la soo saaray ee Singapore, taasoo keeneysa in ka badan 90% cuntada. Jasiiradda Jarmalka waxay leedahay yaraanta dhul-beereed, sidaa daraadeed beeraha ayaa noqon kara hab lagu kobcin karo gudaha qoyaanka badan.
3 wiqiyadood oo ah cagaarka cagaaran ee laga helo beeraha waxaa lagu qiimeeyaa qiyaastii $ 5 ee dukaamada raashinka ee Singapore, oo ka hoosaysa magaca Veggie Life. Bartamihii 2014-ka, Panasonic ayaa sidoo kale bilaabay cagaarka makhaayadaha maxalliga ah.